TV Show Archives - Page 10 of 10 - Purbeli News
संगित भनेकाे मेराे अात्माबाट अाउने कुरा हाे : नबिनके भट्टरार्इ (भिडियाे सहित)
पछिल्लाे समय के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? म यतिबेला भन्नुपर्दा चै लाइभ प्राेग्राम अनी बिभिन्न जिल्लाहरूमा अायाेजना हुने कन्सर्ट र स्टेज प्राेग्रामहरूमै ब्यस्त छु । तपाइकाे डेढ दर्जन बढी एल्बमहरू बजारमा अाए तर श्राेताहरूले ६ , ७ वटामात्रै गितहरू रूचाए किन यस्ताे भयाे ? त्याे त मलार्इ पनि थहा छैन । अर्काे कुरा मेराे गित सबैले गाउनु पर्छ भन्ने...